မယ်ကိုး December 11, 2010 at 12:36 AM
Broken inside. (Avril Lavigne - Nobody's Home)
အမေ့အိမ်ကိုရောက်ချင်ဇောနဲ့..ရန်ကုန်မှာ တစ်စက္ကန့်လေးတောင် မနေချင်ပါဘူး.။
ဒါပေမယ့်..ပြန်တိုင်း ခခအမျိုးအိမ်မှာ ၂ရက်လောက်နေပြီးမှ ပြန်ဖို့ လွှတ်တတ်ပါတယ်။
အမေ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲ မနက်ဆို အိမ်နောက်က
သူငယ်ချင်းအိမ်က နံနက်စာစားဖို့ လာခေါ်ပါတယ်..။
အမေ့အိမ်ပြန်တိုင်း အပြင်စာ စားနဲပါတယ်။
သူငယ်ချင်းက အပြင်လိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တောင်မစားပဲ.သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ ဟင်းနဲ့ သွားစားတတ်ပါတယ်..။
မြန်မာပြန်တိုင်း ဘယ်မှ မလည်ဖြစ်ပါ.။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 11, 2010 at 1:38 AM
ပြန်ရတာ စဉ်းစားကြည့်တော့ ပျော်စရာကြီး..
ဟိုလဲရောက်ရော...အညာတခွင်ပြဲပြဲစင်အောင် စကားတွေပတ်ပြောနေလိုက်တာ..ဧည့်သည်လုပ်ပြီးစားလို့ကောင်း..ဒါပေမဲ့ တလ ကျော်လာရင်တော့ မနေချင်တော့ဘူး..
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 11, 2010 at 1:57 AM
ပြန်လို့ရတဲ့ သူတွေ ပြန်ကြတာ ၀မ်းသာပါတယ်
အမရေ၊ အပြန်လက်ဆောင်အနေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ
အများကြီး ရိုက်ခဲ့ပါလားလို့ ....
mysterysnow December 11, 2010 at 2:27 AM
အိမ်ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးကြည့်ရုံနဲ့ ပျော်နေရတာ....
ညီမလေး December 11, 2010 at 7:53 AM
ပြန်ရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းပျော်ကြတယ် ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်စွာကော စိတ်ရှုပ်စွာကော ရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်ရေား)
မမသက်ဝေရေးထား ပေါ်လွင်လွန်းလို့ အိမ်တောင်ထပြန်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ မမရယ် ..
ပြန်နိုင်သေးဘူး။ ပိုက်ပိုက်စုလိုက် ကုန်လိုက်ပဲ
Anonymous December 11, 2010 at 11:49 AM
"မီးလုံးလေးတွေ ခပ်မှိန်မှိန်နဲ့ သူဌေးမင်းက ပဲပလာတာ"
May I know where is "သူဌေးမင်း" located? Somebody says in Nawaday Road, near Tha_ma_Da Hotel" but couldn't find. Thanks in advance.
သူဌေးမင်းက စမ်းချောင်း ဗဟိုလမ်းပေါ်က ရွေခိုင်ဘေးကလား အမ။ ပဲပလာတာ စားချင်လာပြီ။ အိမ်ပြန်ချင်လာပြီ။
ဖြူ December 11, 2010 at 12:25 PM
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်စရာလေး ရေးထားပေမယ့် အိမ်အလွမ်းတွေနဲ့ ဘဝအမောတွေကို သေသေချာချာ တွေ့လိုက်ရတယ်...
စာရေးသူရဲ့ အတွေးကို ချီးကျူးပါတယ်...
မောင်လေး December 11, 2010 at 4:21 PM
sonata-cantata December 11, 2010 at 4:46 PM
ကလူသစ် December 11, 2010 at 4:48 PM
ခွင့်ရက်မရှိတော့ပါသဖြင့် အိမ်မပြန်နိုင်တော့ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ဟင့် ဟင့်
အပြုံးပန်း December 11, 2010 at 5:54 PM
ပြန်မယ် လို့ တော့
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 11, 2010 at 7:26 PM
အိမ်မပြန်ခင် အိမ်ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ရတဲ့ ဖီလင်လောက် ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူးနော်
အိမ်နဲ့ဝေးသူတိုင်း အိမ်ရိပ်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ခိုလှုံခွင့်ရကြပါစေရှင်
ZZZ December 11, 2010 at 11:35 PM
လေယာဉ်ဆင်းခါနီး လယ်ကွက်တွေကို တွေ.လိုက်ရင် အလိုလိုပျော်လာတယ် ၊ မြန်မာပြည်က ဆင်းရဲပေမဲ့ ခဏပြန်လို.ထင်ပါရဲ့ ၊ နေလို.အကောင်းဆုံး တစ်နေရာဖြစ်ပါတယ် ၊ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်ရောက်ရင် ကမ္ဘာသတင်း သာမက မြန်မာ့သတင်းကိုပါ မသိတော့ပါ ၊ အလွန်ပင်စိတ်ချမ်းသာလှ ပါသည် ၊ စလုံးမှာလို လူတွေပြေးလွှား တာလည်းမတွေ.ရပါ ၊ အေးအေး ဆေးဆေး နေတတ်သော မြန်မာ့လူအဖွဲ.အစည်း ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီး အလွန်ပင်အေးချမ်း လှပါသည် ၊
ဒါပေမဲ့ ခွင့်နဲ. မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်သူများ က နိုင်ငံခြားမှာလို stress အပြည့်နဲ. အလုပ် လုပ်စရာမလိုတဲ့အချိန် ၊ မိဘဆွေမျိုးများနဲ. တွေ.ရတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သုံးနိုင်တဲ့အနေ အထားကြောင့် ပျော်နေသည်ဟုထင်မိပါ တယ် ၊ တကယ်လို.သာ မြန်မာပြည်ကို အပြီး ပြန်သွားခဲ့ရင်တကယ်ပျော်နိုင်မလားဆိုတာ ကိုတော့သံသယဖြစ်မိပါတယ် ၊
မသက်ဝေရဲ့ ပို.စ်က အိမ်ပြန်ချင် သူများအတွက်တော့ "ငိုချင်ရဲ့ လက်တို.များ" ဖြစ်နေမလားမသိဖူး ...
ဇွန်မိုးစက် December 11, 2010 at 11:37 PM
အမသက်ဝေ အတွေးနဲ့ရေးထားပုံလေးက မှန်လိုက်၊ ကောင်းလိုက်တာ။း)
ဇွန်က ၂၀၁၀အတွက် ခွင့်ကုန်သွားလို့ မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး။ ရှေ့နှစ်မှပဲ။
“ဒီမှာနေထိုင် လုပ်ကိုင်ရတာ Stress များလို့လား မသိပါဘူး… မှတ်ဥာဏ်က အရင်လို တယ် မကောင်းချင်တော့ဘူး… ခဏ ခဏ မေ့တတ်လာတယ်…” ဟုတ်တယ်အမရယ် ဇွန့်မှတ်ဉာဏ်တွေလည်း အရင်လောက် မကောင်းတော့ဘူး။း(
ဇွန်မိုးစက် December 11, 2010 at 11:39 PM
ရေးဖို့ကျန်သွားလို့... လေယာဉ်အတောင်ပံနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို သိပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းး)
T T Sweet December 12, 2010 at 12:15 AM
အန်တီသက်ဝေကတော့ ငိုချင်ရက် လက်တို့ ... အဲလေ ပြန်ချင်ရက် လက်တို့လုပ်နေပြီ ...
ပြန်ရမယ်ဆို တွေးရတာ အတွေးထဲမှာတောင် တော်တော်ပျော်နေပြီ ...
ပြန်လို့ မရတဲ့ သူတွေကျတော့ရော သက်ဝေရယ်။
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ December 12, 2010 at 11:06 AM
ဖေဖော်ဝါရီကပဲ ၁ လ ပြန်ထားတာ ခွင့်ရက်လုံးဝမကျန်တော့တာ ပြန်ချင်လွန်းလို့ မပြန်ရရင် ရူးများသွားမလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိုးရိမ်စိတ်၊ သနားစိတ်တွေဝင်ပြီး no pay leave ၅ရက်ယူပြီးတော့ကို ပြန်မှာ ... :(
♫ ♪ အမေ့ကိုပဲ ချစ်သမီး လွမ်းပါတယ် ♫ ♫ ဆိုတဲ့ ရေဒီယိုသီချင်းလေးထဲကလိုပဲ.... ပြန်ပဲ ပြန်ချင်နေတော့တာ..
မမသက်ဝေ လူကြုံထည့်ဦးမလား... :)
ချစ်ကြည်အေး December 12, 2010 at 11:29 AM
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ...အဲသလောက် အိမ်ကို မလွမ်းဘူး၊ ဒီမှာလည်း အိမ်မှာ နေ နေတာပဲလေ...:) "တနေ့နေ့ အပြီး အခြေချဖို့ ပြန်မှာ" ဆိုတဲ့ အသိကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့။ ပျော်ရာမှာ မနေရတဲ့ ဘဝတွေအတွက် နေရတဲ့ နေရာမှာပဲ ပျော်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ZZZ ရဲ့ ကော်မန့်ဖတ်ပြီး နဲနဲ တွေသွားတယ်....ခဏမို့လို့များ ပျော်တာလား တဲ့.....အင်းးးးး
TNS December 12, 2010 at 8:11 PM
မိဘရင်ခွင်နဲ့ ဝေးပြီး ရေခြားမြေခြားမှာ..
အလုပ်လုပ်ရသူတွေ ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အိမ်လွမ်းသူတွေ အားလုံးအတွက်...
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အမေ သီချင်းတွေကတော့....
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားနေရသရွေ့ တော့.........................
ဘယ်တော့မှ ရိုးသွားမယ် မထင်ပါ..။
တို့ တွေ အားလုံးအတွက်များ ရည်၇ွယ်ပြီး
rose of sharon December 13, 2010 at 7:14 AM
အိမ်မပြန်ရလို့ ငိုချင်နေတယ်... အမေနဲ့ အရမ်းတွေ့ချင်တယ် :(
မြူးမြူး December 13, 2010 at 8:13 AM
မမချစ်ကြည်အေးလိုပဲ အိမ်ကိုလွမ်းတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိသလိုပဲ.. မိသားစုဝင်တွေ အိမ်မှာမရှိကြတော့တာမို့ထင်တယ်.. တနေ့ကျရင်ပြန်အခြေချမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် ဆိုတာချင်းလဲ တူတယ်..း)
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး December 14, 2010 at 9:41 AM
ဒီအတိုင်းတောင်အိမ်ကိုလွမ်းနေတာ။ ဒီပို့စ်လေးလည်း ဖတ်လိုက်ရော ချက်ချင်းထပြန်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာပြီ။ မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့ စားလိုက်၊သောက်လိုက် နဲ့ ပျော်စရာနေ့လေးတွေ ပြန်သတိရတယ်။ ညီမက အစား သမားဆိုတော့ ရန်ကုန်က စားစရာတွေလည်းပိုပြီးသတိရမိတယ်။း-)